Sidee Ayay Shaxda Man United Noqon Doontaa Xilli Ciyaareedka Dambe Hadii Ay Hesho Xiddigaha Diirada U Saaran ee Jorginho & Toby Alderweireld – Kooxda.com
Home 2018 February Ingiriiska, Wararka Maanta Sidee Ayay Shaxda Man United Noqon Doontaa Xilli Ciyaareedka Dambe Hadii Ay Hesho Xiddigaha Diirada U Saaran ee Jorginho & Toby Alderweireld
Sidee Ayay Shaxda Man United Noqon Doontaa Xilli Ciyaareedka Dambe Hadii Ay Hesho Xiddigaha Diirada U Saaran ee Jorginho & Toby Alderweireld
Manchester United ayaa wali heysta ciyaaryahano badan xilli ciyaareedkan, lakiin Jose Mourinho ayaa hore u sheegay in inta ka dhiman xilli ciyaareedkan uu u baahan yahay inuu calaamad u noqdo xilli ciyaareedka soo socda.
Kooxda Man City ayaa u muuqata mid ku guulaysatay horyaalka premier league laakiin xiddigo yar oo ay Red Devils ku soo darto kooxdeeda ayaa si weyn u caawin kara xilli ciyaareedka dambe.
Waxa ay noqon doontaa xilli ciyaareedkii 6-aad tan iyo markii ay United ku guulaystay horyaalka premier league dhamaadka xilli ciyaareedkan taas ayaa la macno ah in loo baahan yahay in ay United si adag u gasho suuqa si xilli ciyaareedka dambe ugu tartanto horyaalka.
Marka hore, United waxay u baahan tahay ciyaaryahan khadka dhexe ah Maadama uuna Paul Pogba qaab fiican ku jirin halka uuna Nemanja Matic ahayn xiddig fudud oo kubada horay u wadi kara.
Michael Carrick ayaa wali loo baahan yahay in badalkiisa la keeno iyada oo si weyn loola xiriirinayo xiddiga khadka dhexe ee Jorginho kaas oo la ogaan doono inta ay Nopoli diyaarka u tahay in ay ku iibiso lama oga in ay Man United dhibaato ku noqon doonto lacagta ay Napoli dalbato.
Luke Shaw ayaa qarka u saaran inuu heshiis cusub u saxiixo, islamarkaana uu u muuqdo mid meel iska dhigay dhaawacyadii badanaa, xilli ciyaareedka soo socda waa inuu u soo saaro qaab ciyaareed wanaagsan oo mustaqbal ah.
Daafaca dhexe ayaa dhibaato weyn ku ahaa kooxda Man United xilli uu Eric Bailey qaab fiican ku jiro waxa uu sii wada doonaa booskiisa marka uu si taam ah ugu soo laabto garoomada waxana loo baahanyahay xiddig ay daafaca kula lamaaneeyaan xiddiga reer Ivory Cost waxana lala xiriirinayaa daafaca kooxda Tottenham ee Toby Alderweireld.
Antonio Valencia ayaa weli muhim weyn ka ah kooxda United, halka David De Gea uu sii joogayo Old Trafford taas oo inoo keenaysa saddexda weerarka ah.
Waxa ay wakhti hore ku tahay Alexis Sanchez laakiin Jose Mourinho ayaan kaliya dilayn qaab ciyaareedka xiddiga reer chile marka uu garab ka ciyaarsiinayo laakiin waxa uu sidoo kale joojinayaa horumarka xiddga Anthony Martial maadama xiddiga reer France inta badan laga reebo shaxda Rasmiga ah.
Waa Wakhti hore in laga saaro Shaxda Romelu Lukaku laakiin marka laga hadlo runta mourinho ayaa u baahan xiddig awood u leh in uu kooxda ku hogaamin karo guulo marka uu dib u bilaabmo xilli ciyaareedka dambe si uu ugu guulaysto horyaalka.
Xilli uu Weeraryahanka reer Belguim hogaaminayo weerarka isaga oo ay ka dambayn doonaan xiddigaha Sanchez & Martial ayaa ah shax kale oo uu Jose Mourinho adeegsan karo.
Si kasta ha ahaatee u dhaqaaqisa ay United u dhaqaaqdo xiddiga kooxda chelsea ee Willian ama xiddiga inter Milan ee Ivan Perisic ayaa wax ka abdali kara shaxda, xilli uu xiddiga reer Brazil wakhti adag ku qaadanayo Stamford Bridge waxa laga yaabaa in uu xagaaga isaga baxsado kooxda chelsea si uu ugu biiro koox uu joogto ugu ciyaari karo.
Hadii ay Inter ku fashilanto in ay u soo baxdo champions league Perisc ayaa shaki la,aan raadin doona in uu isaga tago kooxda waana xiddig ay United si weyn u doonaysay xagaagii.